अन्तर्राष्ट्रिय Archives - Page 154 of 158 - खबरमञ्च खबरमञ्च
You are here: Home > अन्तर्राष्ट्रिय - Page 154
ढाका आक्रमण : बन्दुकधारीको कब्जामा २० विदेशी नागरिक
By खबर मञ्च / July 2, 2016 / अन्तर्राष्ट्रिय / Comments Off on ढाका आक्रमण : बन्दुकधारीको कब्जामा २० विदेशी नागरिक
बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको एक क्याफेमा बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ । ३० जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन् । बन्दुकधारीले केही मानिसलाई बन्धक बनाएका छन् । ढाकाको गुलशन क्षेत्रमा रहेको क्याफेमा बन्धक बनाइएकामा झण्डै २० जना विदेशी नागरिक रहेको त्यहाँका अधिकारीले बताएका छन् । चरमपन्धीको गोली लागेर ज्यान जानेमा दुई जना […]
भारत उत्तराखण्डमा बाढीमा परेर ३० जनाको मृत्यु
By खबर मञ्च / July 1, 2016 / अन्तर्राष्ट्रिय / Comments Off on भारत उत्तराखण्डमा बाढीमा परेर ३० जनाको मृत्यु
झापा । भारतको उत्तराखण्डमा बाढीमा परेर ३० जनाको ज्यान गएको छ । ठूलो वर्षापछि आएको बाढीका कारण पिथौरागर र चमोली जिल्लामा धेरै घरमा क्षति पुगेको र खेतबारी डुबानमा परेको स्थानीय अधिकारीलाई उधृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ । धार्चुलाको शुभ गाउँमा बाढीले ३ वटा पुल बगाएको छ । भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डमा उच्च सतर्कता अपनाएर […]
काबुलमा फेरि आतंकवादी हमला, ४० जनाको मृत्यु
By खबर मञ्च / June 30, 2016 / अन्तर्राष्ट्रिय / Comments Off on काबुलमा फेरि आतंकवादी हमला, ४० जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा फेरि अर्को आतंकवादी हमला भएको छ । हमलामा ४० जना मारिएका छन् । मर्नेमा अधिकांश सुरक्षा अधिकारी छन् । सुरक्षाकर्मी सवार गाडीमा आत्मघाती हमला भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले बताएका छन्। हमलाको तालिवानले जिम्मा लिएको छ।
टर्कीको व्यस्त विमानस्थलमा आक्रमण : ३२ जनाको मृत्यु, धेरै घाइते
By खबर मञ्च / June 29, 2016 / अन्तर्राष्ट्रिय / Comments Off on टर्कीको व्यस्त विमानस्थलमा आक्रमण : ३२ जनाको मृत्यु, धेरै घाइते
एजेन्सी । टर्कीको राजधानी स्थानबुलमा रहेको मुख्य विमानस्थलमा आत्मघाती बम आक्रमण तथा अन्धाधुन्ध गोली प्रहारका कारण ३२ जनाको ज्यान गएको छ । युरोकपको सबै भन्दा व्यस्तमध्य एक स्थानबुलको विमानस्थलमा तीन जना आक्रमणकारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा तथा बम विस्फोटका कारण कम्तिमा ३२ जनाको ज्यान गएको हो । घटनामा ६० भन्दा धेरै घाइते भएका छन् । घाइतेको स्थानीय […]
मानवीय आवश्यकता बढ्दो, लगानी बढाउन राष्ट्रसंघको आग्रह
By खबर मञ्च / June 28, 2016 / अन्तर्राष्ट्रिय / Comments Off on मानवीय आवश्यकता बढ्दो, लगानी बढाउन राष्ट्रसंघको आग्रह
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीले बढ्दो मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एकता र लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्वभरका मानिसको आधारभुत आवश्यकता बढ्दै गएको तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्तरमा प्रयास हुन भने नसकेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । यसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा मानवीय संकटको अवस्था आउनसक्ने भएकाले विश्व समूदाय एकजुट तथा लचिलो हुनु […]
हात-खुट्टा नभएका निकको प्रेम कथा , जसले तपाईंलाई रूवाउनेछ
By खबर मञ्च / June 28, 2016 / अन्तर्राष्ट्रिय / Comments Off on हात-खुट्टा नभएका निकको प्रेम कथा , जसले तपाईंलाई रूवाउनेछ
कोलिफोर्निया । विना हात र विना खुट्टाको जिन्दगी कस्तो होला ? के तपाईं यस्तो जिन्दगी विताउने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? शरीरमा केही कमी आउने वित्तिकै त हामी अभाव महसुस गर्छौँ । तर, निक युजिकिक लाखौ मानिसलाई अगाडि बढाउने प्रेरणा बनेका छन् । उनले कहिले पनि हात र खुट्टाको महसुस गर्न पाएन्न्, किनभने जन्मदा नै यस्तै थियो […]
अयोध्याबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छः वामदेव गौतम
झापाका एक जनासहित थप ११६ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि
कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, प्रदेश सभामा तनाव
भारतको मणिपुरबाट उद्दार गरिएका २१ महिलालाई नेपाल ल्याइयो
लेखा समितिमा श्रेष्ठको स्पष्टिकरण, तत्कालको परिस्थिति हेरेर महंगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरियो
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति नेपाल र भारत दुवै देशमा आलोचना
तरकारीको थोक मूल्य न्यून, बजारमा छोइनसक्नु
काठमाडौं । कालीमाटी थोक बजारको तुलनामा खुद्रामा तरकारीको भाउ पाँच …
देशभरका केन्द्रीय अस्पताल र केही प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्ने तयारी
काठमाडौंं । देशभरका केन्द्रीय अस्पताल र केही प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक …
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पनि कालापानीसम्म अझै नेपालीको पहुँच छैन
काठमाडौं । नेपालले आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी …
कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने विषय कहाँ पुग्यो?
काठमाडौं । सरकारले २०७७ सालको शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ का …